Fampihenana ny fiantraikany amin'ny tany Reef Resilience
Fomba fitsaboana kalitaon'ny fiaraha-monina ao Oahu mba hanombanana ny fidiran'ny rivo-drano amin'ny rafi-pako. Sary © S. Kilarski
Ny fampihenana ny fiantraikany eo amin'ny tany dia tetikady lehibe hiarovana ny haran-dranomasina sy ny fokonolona izay miankina amin'izy ireo. Ny fomba fampiasana ny tany mahomby dia tena manakiana ny fitantanana ny fitifirana rano mba hahazoana antoka fa ho foana ny fitaterana ny sediment, ny solika ary ny loto hafa amin'ny vatohara. Ny fandraisana andraikitra eo amin'ny fitantanana ny rano sy ny fandaharam-bato dia mety ho andraikitra manan-danja amin'ny mpitantana haran-dranomasina.
Ny fampandrosoana drafi-pitantanana ny rano dia mitaky fandrindrana amin'ireo mpiara-miombon'antoka liana (governemanta eo an-toerana sy ONG) ary ireo mpiombon antoka ao anatin'izany ny vondrona miankina sy tsy miankina ary mpikambana ao amin'ny fiarahamonina Ny drafitra dia mazàna ahitana vina iraisana sy paikady iraisana hamahana ireo olana hita ho fanatsarana amin'ny alàlan'ny dingan'ny drafitra fandraisana anjara. Ny mpitantana ny haran-dranomasina dia afaka mifandray mivantana amin'ireo mpampiasa rano amin'ny alàlan'ny fanohanana paikady manokana izay laharam-pahamehana amin'ny fahasalaman'ny haran-dranomasina.
Ny karazana paikady lehibe mety hidiran'ny mpitantana haran-dranomasina mba hampihenana ny fiakaran'ny rano amin'ny vatohara dia:
Famerenana ny fikajiana / fanesorana - Ireo mpitantana ny haran-dranomasina dia afaka manentana ny saina momba ny fiantraikan'ny tontolo iainana an-dranomasina sediments tafahoatra miditra rano mandeha ireny. Misy tetikady maromaro azo atao mba hampihenana ny fikajiana amin'ny sehatry ny fambolena sy fiompiana an-tanàn-dehibe, anisan'izany ny fialokalofana ny faritra mitoka-monina, ny fanodinana, ny fitrandrahana, ny fihazakazahana / ny fambolena, swales, lalana fandoroana sy fandoroana sedimenta (dobo fametrahana, ala, sns). Ny fandaminana sy ny famolavolana izay mitazona ny fitantanana ny hydrologia voajanahary dia afaka misoroka olana maro momba ny fipoahana.
Fitaterana rano fisotro madio sy rivo-doza - loharanom-paritra fandotoana Mety ho loharanom-pahasahiranana miharihary ho an'ny tontolo iainana an-dranomasina. Na dia lafo aza indraindray, misy ny fepetra azo tanterahina amin'ny teknika hampihenana ny vokatra ateraky ny rano maloto sy tafio-drivotra. Ny toeram-pitsaboana maloto mahomby sy voadidy tsara dia afaka manala na mamily ny toerana maro mampidi-doza mankany amin'ny fanariam-pako, fa ny dobo honenana sy ny sivana biolojika (toy ny tany mando) dia afaka mampihena be ny entona manimba entin'ny rano tafio-drivotra. Amin'ny tranga sasany, ny fanitarana ireo teboka mivoaka any ivelany na any anaty rano lalina dia afaka mampihena ny fiantraikan'ny eo an-toerana amin'ny alàlan'ny fanalefahana lehibe kokoa. Raha tsy misy serivisy fitsaboana afovoany, ny filankevitra sy ny tompon-trano dia azo ampiana / entanina hitazona ny rafitra septika ary hamadika ny cesspool ho rafitra septic raha azo atao. The Bonaire raharaha fianarana dia manome ohatra iray amin'ity paikady momba ny rano ity.
Fampihenana ny fanodinana simika avy amin'ny fambolena - Toaka be loatra Ny fidirana ao amin'ny renirano dia mety hitarika ho amin'ny fiantraikany ratsy amin'ny kalitaon'ny rano, ary koa mampihena ny tombom-barotry ny toeram-piompiana. Ny mpitrandraka haran-dranomasina dia afaka manampy ireo manamboninahitra momba ny fandatsaham-bato miaraka amin'ireo tompon-tany mba hahatakatra ny fiantraikany ara-bola sy ara-toekarena amin'ny fampiasana tsy fahampian-tsakafo ary manome tari-dalana momba ny karazan-tsakafo tsara sy ny fampiharana. Ireo mpitantana ny haran-dranomasina koa dia afaka manampy ireo manam-pahaizana momba ny fitantanana ny lakan-drano hahatakatra ny mety ho vokatry ny herbicides sy ny pestiside samihafa, izay mety ho tena mampidi-doza ny tontolo iainana an-dranomasina sy ny rano ary mety henjana. Any amin'ny firenena maro dia misy fitsipika henjana momba ny fampiasana ny fambolena fambolena izay mety hanimba ny tontolo iainana (toy ny DDT sy ny dieldrin), ary ny mpitantana ny haran-dranomasina dia afaka manampy amin'ny fanentanana momba ny safidy manerantany any amin'ny firenena izay mbola ampiasaina amin'ny fako simika.
Fifandraisana iraisam-pirenena - Ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana sy ny mpampiasa onja (mpanararaotra, mpizahantany, sns.) No tena mandray soa amin'ny ezaka atao hampihenana ny fihenjanana eny amin'ny haran-dranomasina, ary mety ho mpiara-miasa sarobidy amin'ny ezaka hanapahana ny fanapahan-kevitry ny fitantanana ny rano. Ireo mpitantsoratry ny vatohara dia afaka mampitombo ny fari-piadidiana amin'ny fitantanana ny fitantanana ny fitantanana ny fitantanana ny rano amin'ny alàlan'ny fandaharam-pampianarana sy fandaharam-pianarana mifandraika amin'ny mpandray anjara momba ny haran-dranomasina. Ny fandaharanasa fanaraha-maso na ny fandraisana andraikitra amin'ny fandraisana anjara (toy ny fandaharam-potoana fanadiovana) na ny programa "adopt-a-reef") izay mahakasika ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina dia fomba lehibe ahafahana miara-miasa amin'ireo mpandray anjara ary mamorona fahatsapana fitantanana. Ireo mponina mpitrandraka haran-dranomasina dia matetika koa ireo mponina ao anaty rano, mba hanampiana ny mponina ao an-toerana hahatakatra fa ny fifandraisana eo amin'ny hetsika ataony amin'ny tany sy ny vokatra ho an'ny vatohara dia mety ho fomba mahery vaika hampihenana ny loharano voaloto amin'ny tany.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFikarakarana fikarakarana sy ny fiarovana ny vatoharan-dranomasina: tari-dalana mahomby ho an'ny mpandrindra loharanon-drano
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoHawaii Watershed Guidancemanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFitantanana ranomandry iray - loharano loharanon-kevitra ho an'ny mpikaroka momba ny fiarahamoninamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTetikasan'ny EPA US ho fampiroboroboana planin'ny ranon-drano mba hamerenana sy hiarovana ny rano
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSobrevive al Cambio Climático en el Caribe. Catálogo de Buenas Prácticas de uso del Suelo, Manejo del Paisaje y Construcción en la zona Costera de Quintana Roomanokatra fisie PDF